Yaa mas'uul ka ahaa dhiibistii Qalbi-dhagax ee Itoobiya? | KEYDMEDIA ENGLISH
Yaa mas’uul ka ahaa dhiibistii Qalbi-dhagax ee Itoobiya?
Maryan Qaamim, ayaa Farmaajo iyo Kheyre, ku eedeesay in ay masuul ka ahaayeen in Ururka ONLF lagu tilmaamo inuu la mid yahay Al-qaacida, waxayna ugu baaqday in ay qaladkooda qirtaan inta dadka hor yimaadaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirkii hore ee Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka, Maryam Qaasim Axmed, oo ka mid ah shaqsiyaadka aadka ugu dhawaa Madaxweynihii hore Farmaajo, ka hor inta uusan xaafiiska galin, ayaa masuuliyadda gabood-falkii lagula kacay Qalbi-dhagax 2017, dusha ka saartay Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaarihii hore Kheyre.
Maryan Qaasim oo ahayd halka Wasiir ee diiday inuu u codeeyo qaraarkii Xukuumaddii Kheyre, argagixiso ugu aqoonsatay ONLF, ayaa sheegtay in la joogo xilligii ay shaqsiyaadkii xilligaa dalka hoggaaminayay ay dadka hor imaan lahaayeen, isla-markaana umadda cafis weydiisan lahaayeen.
“Ra’iisul Wasaare Xasan Cali kheyre, isaga ayaa shir guddoonka aha kulankii Golaha Wasiirrada ay ONLF argagixiso ugu aqoonsaden, Madaxweynuhuna wuxuu la ogaa, labaduba raalli-galin ha bixiyaan, hana sheegeen in ay qalad galeen”, ayay tiri Maryan Qaasin.
Dhamaan Musharixiinta ku mideysan Golaga Midowga Musharixiinta, ayaa soo dhaweeyay go’aankii shalay, marka laga soo tago RW hore Kheyre, kaas oo qayb ka ahaa qorshihii, Qalbi-dhagax loogu dhiibay Itoobiya, isla-markaana ONLF loola mid dhigay Al-qaacida.
Farmaajo, dhankiisa wali kama hadlin go’aankii shalay ka soo baxay Xukuumadda, waxaana aamusnaanta shaqsiyaadkii dalka ugu sarreeyey 2017, ay la micno tahay in ay wali ku adkeysanayaan go’aankii qaldanaa iyo gabood-falkii ay kula kaceen Qalbi-dhagax.
Farmaajo, wuxuu hore isugu dayay inuu iska fogeeyo ogaalka kiiska, wuxuuna si dadban dusha uga saaray Kheyre, xilli uu wareysi bixinayay, wuxuu sheegay in go’aanka ONLF, uu ka yimid dhanka Golaha Wasiirrda, Isla-markaana baarlamaaku diiday, isaaguna uu ku aragti yahay Golaha shacabaka.
Hayeeshee, Xildhibaan Xassan Yare, oo ka tirsanaa Baarlamaankii 10-aad ee JFS, ayaa dhawaan sheegay in Farmaajo u yeeray xilligaas isaga iyo ku dhawaad 10 Xildhibaan oo Qalbi-dhagax ku heyb, si ay magtiisa ugu qaadaan loogana wada-xaajoodo tallaabada xigta ee la qaadayo, taas oo caddeyneysa in Farmaajo lahaa masuulidda 1aad.
Maryam Qaasim Axmed, waxa ay si weyn u bogaadisay Ra’iisul Wasare Rooble, waxayna guud ahaan Golaha Wasiirrada, uga mahad celisay go’aanka adag oo ay qaateen, halka kuwii hore ee Kheyre hoggaaminayay ay ugu baaqday in ay cafis dalbadaan.